🥇 ▷ Daemon X Machina wuxuu maanta ka furayaa Nintendo Switch ✅
Daemon X Machina de Marvelous iyo Fist Studios ayaa hada laga heli karaa Switch, kadib markii dhowr demos cinwaanka cinwaanka mekas ugu dambeyntii la gaarey Switch si ay u cadaato in robotka weyn ee la dagaallamaya robotyo badan iyo kuwa robotska shisheeyaha aysan ka bixin qaab ahaan.
Waqtigan xaadirka ah wax yar oo qarsoon ayaa ku xeeran ciyaarta, Daemon X Machina wuxuu lahaa labo demos aad u ballaaran oo matali kara dhamaan farsamooyinka aasaasiga u ah ciyaarta oo cadeeyay in cinwaanka uu toos u ahaa ARPG oo leh mekas iyo wax yar. Shakiga ka dhex jira kuwa wax iibsada waxay bilaabeen inay soo muuqdaan iyagoo rajeynaya in falanqaynta ugu dambeysa ay beddeli doonto xaaladda, maantana qof walba ayaa fikraddiisa ka dhiiban kara ciyaarta.
Si daran Beaten
Oo waxay umuuqataa in falanqaynta hore inaanay si fiican ugudanaynayn horyaalkan qaaliga ah, Daemon X Machina ayaa ‘lagu iibiyay’ inuu yahay ciyaar ficil aad u xiiso badan isla markaana loo badin karo isla markaana xaqiiqdu tahay in qaybtan la fuliyay, ciyaarta ciyaarta ayaa si daacad ah loogu amaanay inta badan warbaahinta khaaska ah, iyo sidoo kale nashqadeynta iyo qaabaynta mekas.
Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in Daemon X Machina waxyar uu soo bandhigo, sheekada ayaa waxaa ku garaacay clichés waxaana la sheegaa in cinwaanka uusan laheyn qaab ciyaareed ciyaarta si ay u siiso nolol dheeri ah oo ka badan ololaha weyn. Ciyaarta ciyaarta waxaa diiradda lagu saaraa sidii loo fulin lahaa hal hadaf ka dib mid kale oo aan ku leenahay marxalad aad u weyn oo ay hareereeyaan cadawga, mekaheena ayaa ku dhaqaaqi kara hawo ama dhul, waxaana jira xulashooyin dagaal oo badan oo lagu madadaasho.
Dhibaatada ayaa ah in hawlgallada aysan aad u kala duwanayn isla markaana faa’iidooyinka ciyaarta ay ku daboolan yihiin soo laabashadooda, waxaas oo dhami waxay dhalleeceeyeen inay ku hayaan dhibcaha 69 ee Metacritic (hadda). Ceeb weyn ayaa tan iyo markii ay ahayd mid ka mid ah shaqooyinka loo yaqaan ‘Switch’ ee Sebtember.
Taasi waxay dhahday, waxaa sidoo kale la sheegay in taageerayaasha mekasku gurigooda ku dareemi doonaan kulankaan, hadii waxa aad raadineyso ay tahay ficil ku saleysan mekas oo aadan aad uga taxadarin waxyaabo kale sida taariikho ama garaafyo, cinwaankan ayaa laga yaabaa inuu adiga. Sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad soo dejiso muraayadda ciyaarta kahor intaadan go’aansan.
Waxaan kaaga tageynaa soosaarista furitaanka hoosta.
Kuwani waa “bilaashka” Ciyaaraha PlayStation Plus ee Ogosto